www.nainglinn.blogspot.com: “ အမေကို ရက်ကြီးအခါကြီးမှ ကန်တော့မိကြသလား ”
ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါမယ် ဆိုဒ်နှင့် Joinထားပေးလိုက်ပါ
သင့် ကွန်ပြုတာအတွက် software ဒေါင်းရန်
အသုံးဝင် software များ
သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဥာဏိဿရ ၏ တရားတော်များ အရှင်ဆန္ဒာဓိကဓမ္မစာအုပ်များ ဆင်းတုရှိခိုးတာ အကျိုးရှိသလား ငါးပါးသီလ ကံမြောက်ကြောင်း အချက်များနဲ့ ကျူးလွန် ခြင်းကြောင့် ရမည့် အပြစ်များ ရဟန္တာ စစ်တမ်း မေတ္တာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ ဘုရားရှင်တို့၏ တူညီသော အချက် ၃၀‏ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဉာဏ်တော်(၁၀)ပါး ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော တရား အဘိဓမ္မပိဋက ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် စိတ်, စေတသိက်ပိုင်း mp3သီချင်းနာထောင်ချင်ရင် မြန်မာဘောလုံးချစ်သူတို့ဆုံစည်းရာ အာဆင်နယ် ချဲ့ဆီး မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ဓာတ်ပုံများ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သစ္စာတရား ထေရ၀ါရဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်များ အသင်း လယ်တီ ကျမ်းစာများ တိပိဋက ဘာသာပြန် နိုင်ငံခြားဝတ္ထုများ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်) အမေးအဖြများ ရွှေပါရမီဆရာ တော် အရှင်ဆန္ဒာဓီက မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏သစ္စာတရား ထေရ၀ါရဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်များအသင်း လယ်တီ ကျမ်းစာများ တိပိဋက ဘာသာပြန် နိုင်ငံခြားဝတ္ထုများ ဦးကောဝိဒ(မြိတ်) အမေးအဖြများ ရွှေပါရမီဆရာ တော် အရှင်ဆန္ဒာဓီက အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်) ရွှေပြည်သာ၏တရားစာအုပ်များ ပခုက္ကူဝိပဿနာ သင်တန်းဆရာကြီးဦးကြင်ရွှေ၏ ၀ိပဿနာသင်တန်းတရာတော်များ ဖြူးဆရာတော်ဘုရား ပျံလွန်တော်မူခြင်း ဖြူးဆရာတော် ဟောကြားတော်မူသော တရာတော်များနှစ် ရေးသာပြုစုခဲ့သောကျမ်းဂမ်များ မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဒေါက်တာကောဝိဒ၏ တရာတော်များ ဓမ္မအမေးအဖြေများ ဖတ်ရန်စာအုပ်ကောင်းများ ဓမ္မ၀ိရဂျာနယ် ရဝေနွယ်(အင်းမ) ဓမ္မဒူတဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ ကျေးဇူးတော်ရှင် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကန္နီဖောင်ဒေးရှင်းဖွဲ့ မောင်းထောင် မြေဇင်းတောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိအကျဉ်း ဗုဒ္ဓတရာတော် အေးရိပ်ချောင်းမဟာစည် သာသနာ့ရိပ်သာ ရဲလေး - တတိယကာရန်သီချင်းများ ကျွန်တော်နှင့်ကျေက်ခောတ်နှင်းဆီ သတ်ပုံမရှိတဲ့ဗလာစာရွှတ် ကဗျာပြခန်း နွေဦးပုံပြင်ရာသီခွင်နှင့်သိပ္ပံအမြင်တားရော့ဖြင့် ဗေဒင်မေးသွားနိုင်ပါတယ် မြန်မာ့ကာတွန်း ဗေဒင်သုခုမ မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်များ ကမ္ဘာ့ စွယ်စုံကျမ်း မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ _ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ ကံချွန်-ကြားဖူးနားဝဟာသများ ကံချွန်-ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တ္တု တိုများ ကံချွန် - အင်တာဖီးနဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာကဟိုလိုရှိတယ်။ ကံချွန် - မန္တလေးကလူတွေအကြောင်း ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကိုမောင်သွား ထားလေမလား ချစ်ဦးညို - ရုက္ခစိုးနဲ့ အခြား ပြိတ္တာများ ချစ်ဦးညို-၀ိဇိတာဝီ ချစ်ဦးညို - ရာဇကုမာရ ချစ်ဦးညို - မလေးမဏိစန္ဒာ ချစ်ဦးညို - စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ ချစ်ဦးညို - ၀ိသာခါနှင့်သီတာ ချစ်ဦးညို - ချစ်သောပါဒဧကရီ ချစ်ဦးညို - ချစ်သူမင်းနန္ဒာ ချစ်ဦးညို-ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း ချစ်ဦးညို - လောကဓံနှင့် လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း ချစ်ဦးညို - ချစ်သောပါဒဧကရီ ချစ်ဦးညို - ရှင်စောပု ချစ်ဦးညို - နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင် ချစ်ဦးညို - မဏိစန္ဒာဥဒါန်း ချစ်ဦးညို - အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ ချစ်ဦးညို - သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေမယ့် စကားများ ချစ်ဦးညို -လင်္ကာဒီပချစ်သူ နီကိုရဲ - ကျွန်တော်နဲ့ဈေးသည်အလွဲများ နီကိုရဲ - ဇွတ် နီကိုရဲ - ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း နီကိုရဲ - လှည့်စား နီကိုရဲ - အိုးလေး နီကိုရဲ - နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ် တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန် ကဗျာများ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ပညာရဲ့ သဘော တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ် တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့် မိုးတစ်မှောင့် တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်း မွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ အောင်သာငယ် ဒို့သာသနာ ဒို့ဘာသာ သဉ္ဖာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် မြန်မာဝတ္ထုစာအုပ်များ မြန်မာE-Library တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း တာရာမင်းဝေ-ကျွန်တော်နဲ့ ဧဒင်ကခြေသည် တာရာမင်းဝေ အရှေမြို့ ရိုးကမိုးရေစက်များ တာရာမင်းဝေ-ရွှေဖိနပ်မှာအစ မ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး တာရာမင်းဝေ - ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ ခွာသံ တာရာမင်းဝေ-ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း တာရာမင်းဝေ-ကောင်းကင်အကြွေ ကောက်တဲ့လက်. တာရာမင်းဝေ-မှော်ဆရာရဲ့ ကျောင်းစာအုပ် တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ် ကျေးမှု တာ၇ာမင်းဝေ ကျွန်တော်နဲ့ကြယ်မြင်လမြင် လောကဓံ တာရာမင်းဝေ ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပုရပိုက် တာရာမင်းဝေ - ရှူး တာရာမင်းဝေ - သူအိုးပုတ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ တာရာမင်းဝေ -ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း အကြည်တော် - စွယ်စုံလက်ဆောင် အကြည်တော် - လှအိုးကွဲ အကြည်တော် - သံသရာရထား အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည အကြည်တော်-ကျွန်တော်ချစ်သူပြောပြတဲ့ သူချစ်သူအကြောင်း အကြည်တော် - ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိပ် အကြည်တော် - ဘီလူး အထင်ကရ - မင်းနဲ့ကိုယ်
ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ကာ (MBM)မြန်မာ မာတီပလိုင်တွေဆုံပွဲ အမှတ်တရ (MBM)မြန်မာ မာတီပလိုင်းပြုလုပ်ခြင်း မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြား ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သောဗုဒ္ဓတရာတော်များနှစ် ကျမ်းစာတော်အဖုံဖုံ သရဖူသတင်း MRTV-3 MRTV-4 Gmail သုံးချင်ရင် အင်တာနက်ဂျာနယ် အရှင်ဆန္ဒာဒိက ဈေးကွက်ဂျာနယ် ရတနာပုံ မြန်မာ့အင်တာနက် နေ့စဉ်ရုပ်ရှင် ဓမ္မအမေးအဖြေများ တရာတော်ကဏ္ဍ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲပွဲတော် သတင်းအတိုအထွာ ► တားရော့ဗေဒင် Bun ထားရင် ကျော်ဝင်မယ့် ►proxytor GAMES ဂိမ်းများ ► VIWAWA မီနီဂိမ်းများ y8 ဂိမ်းများ ဘောလုံးပွဲအဖြေသိချင်ရင် လူငယ်နှင့်ပညာရေး အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာချင်ရင် လွယ်ကူလေ့လာအင်္ဂလိပ်စာ မိမိအသံထွက်မှန်မမှန်ဒီမှာစစ် ESL အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်စာ စံမြန်မာ မြန်မာကွန်ပျူတာစနစ် ကျေးဇူးပြစ်မှား ဒဏ်ဆယ်ပါး နှင့် ခင်ပွန်းကြီး ဆယ်ပါး ကန်တော့ခန်း -ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဦးဇေယျပဏ္ဍိတာ အဘိဓာန်များ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အင်္ဂလိပ်-အင်္ဂလိပ် ရာသီဥတုသတင်းများ မြန်မာတိုင်း(မ်) ခေတ်လူငယ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ နယူးယောက်တိုင်း(စ်) ရန်ကုန်မီဒီယာ မြန်မာတိုင်း(စ်)အင်္ဂလိပ်လို မြန်မာနက် ပလန်းနက် မိုးကုတ်ဆရာတော် အရှင်ဝိမလ လူဓမ္မကထိကများ သံဃာတော်များ ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသပါဠိတော် နှင့် အရကောက်အဓိပ္ပါယ် ဖတ်ရန်စာအုပ်ကောင်းများ တိုတ်ရိုက်တရားတော်ထုတ်လွှင့်မူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ ဓမ္မအမေးအဖြေများ လောကနတ်စာပေ ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ ဓမ္မတေးသီချင်းများ ဓမ္မ၀ိရဂျာနယ် မြန်မာ ၀တ္ထုစာအုပ်များ ဗန်းမော်ဆရာတော်အရှင်ကုမာရာဘိဝံသ-နိဗ္ဗာန်တံခါးဖွင့်တရားတော် အောင်မြင်ခြင်းမဂ္ဂဇင်း ၂၀၀၈ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ ဒေါင်းလုပ်တရားတော်များ အရှင်ဇ၀န(မေတ္တာရှင်)၏ တရားစာအုပ်စာပေများ မြန်မာအကယ်ဒမီဆုပွဲ အောင်မြင်ခြင်းမဂ္ဂဇင်း LIFE STYLE မဂ္ဂဇင်း ပလုတ်တုတ်မဂ္ဂဇင်း Elevenဂျာနယ် လျှပ်တပြက်ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် ရန်ကုန်တိုင်းဂျာနယ် ဖတ်ပါသတင်းဂျာနယ် မြန်မာတိုင်းဂျာနယ် လောကနတ်စာပေ သံလွင်အိမ်မက် လင်းထတ်ဖိုရမ် ကြေးမုံသတင်းစာ တူဒေးမဂ္ဂဇင်း ရတနာပုံအက်ဖ်စီုံ ကဗျာသီတဲ့ကြိုး ကလိုစေးထူး ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင် ကိုရင်ညိန်း ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် ကေ ကေဂျွန် ကေ.တီ.အမ် မိုးမလင်းမီ ရွာလမ်း သီချင်းကြိုက်တဲ့အရူးလေး ကျော်စွာ ကျော်မင်းထွန်း အိမ်ဝေးသူ သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ အိမ်ရှေ့မင်းသား အိပ်မက်အိမ် တိမ်ညိုဘာကြောင့် မှိုင်းရလဲ စိတ္တဇညရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
... ........... ... ...... ...
Web Counter .... .. ...
“ အမေကို ရက်ကြီးအခါကြီးမှ ကန်တော့မိကြသလား ”
ရပ်ကွက်ထဲတွေမှာ ကြားကြားနေကြတဲ့စကားသံကတော့ “ ဒီနေ့ သီတင်းကျွတ်ဟေ့ အမေ့ကိုသွားကန်တော့ရအောင် ” ဆိုတဲ့ စကားသံတွေဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ် အခါကြီးရက်ကြီး သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်တိုင် အမေများနေ့ သင်္ကြန် စတဲ့အချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အထူးတလည်အမေ့ကို သတိရကြပြီးကန်တော့လေ့ရှိကြသလား ။
အမေ ဆိုတာ . .
- နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း မနက်မိုးလင်း လို့ ကိုယ့်အသိစိတ်ထဲ လောကကြီးဝင်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကန်တော့ထိုက်သူဖြစ်တယ်
- ကိုယ့်မှာရှိတာလေးကို ချကျွေးလို့ သားသမီးအတွက် ထမင်းမစားရက်တဲ့အမေ့ကို နေ့တိုင်းကန်တော့နေသင့်တယ်
- ဘ၀မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကြုံကြုံ အရေးကြီးမှ အမိတ မဖြစ်ရအောင် အရေးမကြီးလည်း မိဘ ကို ဘယ်တော့မှ မကင်းကွာနေရဘူး
- တခါတလေ စော်ကားမော်ကားပြောမိသမျှ လက်ဆယ်ဖျား ထိပ်မှာမိုးလို့ အမြဲရှိခိုးကန်တော့ထိုက်သူဖြစ်တယ်
- ဘုရား နဲ့တစ်ဂိုဏ်းထဲ ရှိနေတဲ့ မိခင်ဆိုတာ လောကမှာ ကိုယ့်အတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့အတွက် ၀စီကံနဲ့တောင်ပြစ်မှားဖို့မဆိုနဲ့ မနောကံနဲ့တောင် မပြစ်မှားသင့်ဘူး
ရက်ကြီးအခါကြီးမှ အမေ့ကို သတိရတတ်တဲ့ သားသမီးတွေမဖြစ်မိကြပါစေနဲ့ . . နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်း မိဘကို သတိရ လို့ ရိုသေ ဦးခိုက်နေတဲ့သားသမီးများဖြစ်ကြပါစေ ။
<!-end of code--> ...
movie of the week (4)
website လမ်းညွန် (4)
ကဗျာ များ (16)
လမ်းညွန် website များ
"> တရား ဓမ္မ Nibbana ပါရမီ ဓမ္မ အင်တာနက် Virdhamma ဆန်နီနေမင်း The Buddha’s Last Word ရွှေပါရမီ mogokinsightny ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဒဘာသာအသင်း ပါရမီ ဓမ္မ အင်တာနက် ဓမ္မ Web ဓမ္မ ဒါန သာသနာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန မိုးကုတ် ဝိပဿနာ ရိပ်သာ မင်းသီလ မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်ကြီး လူသား ဗုဒ္ဓ သီတဂူဆရာတော် ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၂) (အရှင်ဇ၀န)(မေတ္တာရှင်-ရွှေပြည်သာ -၁) သဲအင်းဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ မဟာစည်-၂ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရွှေဟင်္သာဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ဆရာတော် ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ကောဝိဒ-မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဖြူးဆရာတော် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်လောကနာထ(၁) အရှင်လောကနာထ(၂) ကသစ်ဝိုင်ဝိပဿနာ ဓမ္မရိပ်သာ ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ် တရားတော်များ(၁) ဓမ္မ ဆုံချက် ဝီရဓမ္မ ဓမ္မတရားတော်များ Zack Notes
မြန်မာ Font MM-Font Converter ဧရာ Font Win-Myanmar Font Myanmar IT Development Myanmar Unicode & NLP Research
သတင်းဆိုဒ် မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အင်တာနက်ဂျာနယ် မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ Soccer Myanmar ဒို့အာဇာနည် Partners World နေပြည်တော် ရွှေဒေါင်းတောင်ဂျာနယ် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့အသံ Bin's Corner ဓါတ်ပုံများ မြန်မာဝီကီလိခ် ဒေါင်းမာန်ဟုန် ကြေးမှုံသတင်းစာ Freedom News Group မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ မြန်မာအင်တာနက်ဂျာနယ် မြစ်မခ All-Channel Myanmar လမ်းပြကြယ် ပေါ်ပြူလာမြန်မာ We Fight We Win ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ခေတ်လူငယ် Eleven မီဒီယာ မြန်မာတိုင်း(မ်) နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း လျှပ်တစ်ပျတ်ဂျာနယ် သတင်းနှင့်မီဒီယာကွန်ယက် ငုရင်ပြင် Aung Info BBC မြန်မာပိုင်း အစီစဉ် RFA မြန်မာပိုင်း အစီစဉ် VOA မြန်မာပိုင်း မိုးမခ ဧရာဝတီ မဇ္ဈှိမ ရိုးမ ၃ ဟစ်တိုင် ခါကာဘိုရာဇီ NMG သတင်းမီဒီယာ နိရဉ္ဇရာ KIC မြန်မာစာကြည့်တိုက် Forever-Space သံလွင်အိမ်မက် ဈေးကွက် ဂျာနယ် မြန်မာ ဂီတ To Day မဂ္ဂဇင်း မြန်မာသတင်းနှင့်လင့်များ မြန်မာသတင်းများဖတ်ရှုရန် MY MC NEWS7DAY NEWS JOURNAL နေ့သစ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် ရိုးရာလေး ချိုးလင်းပြာ ဒေါင်းမာန်ဟုန် ဇွဲကပင် ရိုးမ(၃) ယနေ့မြန်မာ စွယ်စုံမီဒီယာ ပုလဲနက် မာယာ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း ယနေ့မြန်မာ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ မြို့တော်ပုသိမ် ပိတောက်မြေ ဧရာဝတီ ကိုပီတာ၏အတွေးပုံရိပ် မြန်မာပို့စ်သတင်းဂျာနယ် မြတ်လေးငုံ Time Zone Vimeo
နည်းပညာများ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် စောစံဆိုဒ် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ မြန်မာ Photoshop မြန်မာ Genius မြန်မာ IT Pro သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း ပဒုမ္မာ ICT Reader မြန်မာ IT Resource Info Mystery Zillion Blog Technology Man KP-3 နည်းပညာ Driver for Windows Any browser
Blogger များ 11 Dreams နေမင်း IT Re-share Site ကိုကြီးလေး ဝင်းကမ္ဘာကျော် MOTAA ကျော်စွာငြိမ်း ကိုညီနေမင်း သားကြီး ကိုဇော် ကိုသောင်း ဖိုးသား မုန်တိုင်း ရာမည ဖိုးလပြည့် လင်းလဲ့ဦး လုလင်တဦး၏အတွေးဆုံမှတ် အညာသား Group အဖြူရောင်သံစဉ် အကြင်နာနန်းတော် ကောင်လေးငယ် ကောင်းမင်းထက် DDL2-Software-Site Top Download ကော့သောင်သား မောင်ပညာ မောင်စေတနာ ရဲမာန် လေပြေလေးရဲ့ဒိုင်ယာရီ ကိုမင်းကျော် ခေတ်ခမ်းကောင် စေတန်ဂေါ့ မောင်လှ ထူးတေဇာ မောင်လူအေး ko kyaw myint Oo mmwordpress Myanmar Blogger Helpdesk သံလုံငယ် ဇော်ဂျီ အနုမြူဆိုင်ရာများ Blogobo-Blog ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဆိုင်ရာများ သန့်ယဉ်ကို ကောင်းကင်ဇင်ယော် ညခင်းရဲ့လမင်း
Social Net ဧဒင်ဥယျာဉ် ရွှေမြန်မာဥယျာဉ် အလင်းကမ္ဘာ ထာဝရသူငယ်ချင်းများ အနာဂတ်အိမ်မက် အိမ်လွမ်းသူ သက်တန့်ရွာကလေး မြန်မာချစ်သူ ချစ်သူမြို့တော် ချောကလက်မြို့တော် အင်တာနက်ချစ်သူ Myanmar IT Development Blink hacker group Myanmar-Selection အရူးလွယ်အိတ် ဇူးစာရှင်လေး Online-ချစ်သူ အချစ်နန်းတော် အသဲကွဲမြိုတော် ဇွဲကပင်မြေ မြန်မာသူငယ်ချင်းများ
ဖျော်ဖြေရေး မြန်မာ MP3Site ညကဗျာ မဉ္ဇူရီ လိုတရ ရွှေအိမ်မက် Myanmar World အိမ်မက်လှိုင်းရေဒီယို အာရှ ရုပ်ရှင် မြန်မာ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် ခရမ်းပြာအိမ်မက် အင်းဝ Video Shwe Dream Burmese Classis Shwe O 风行网 Createagif
ဓါတ်ပုံဆိုဒ် HD-Wallpapers PS-Tools ဓါတ်ပုံမှကာတွန်းသို့ ဓါတ်ပုံပြုပြင်ရန် ဓါတ်ပုံပညာလေ့လာရန် Photo funia Fun photo box Funny-Logo Logo Style Photo 505 Face in hole Photo frame-1 Photo frame-2 ICon-finder Story-Photo Free proxy surfing
အားကစားဆိုဒ် Asian Bookie UEFA FIFA Live Score Score-Myanmar best soccer gallery ပွဲစဉ်တွေကြည့်ရန် ပွဲစဉ်လောင်းကြေးပေါက်ဈေး
လမ်းညွှန် - ၂
ကျန်းမာရေး Trip Prep HIV Info MM Healthy Net Your Health Goals အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး သွားနှင့်ခံတွင်း (English)
အချက်အပြုတ် Food T V Cook's Thesaurus bento.com Foodors foodors.com Bento brainsbuzz.com foodsubs.com
မြန်မာ့ ဗေဒင် ဗေဒသုခုမ မြန်မာရိုးရာနက္ခဗေဒင် အောင်ပါစေ မိုးတား နက္ခတ္တဆိုင်ရာ
တန်ပလိတ်ဆိုဒ် Mashable premiumbloggertemplates Blogcrowds Deluxe Templates B-Templates My Fun Doo-Templates blogger tricks Nokia applications store Make-flash-websites blogger tricks မြန်မာဝက်ဆိုဒ် Colour-Codes.html
နည်းပညာ sites homeandlearn online for computers intelligentedu Network tutorials profsr pickatutorial Web developers html code tutorial online-education 3-School 3D-tutorial archive3d Ever motion 3D links 3D-resources blogger tricks HTML-School Free Domain name
Hosting ဆိုဒ် Repid Share Ziddu Upload Box Box Z Share Snap Drive4Share File Den Mega Upload Media Fire Live Share File Dropper File Savr Enter Upload Badongo Web File Host Uploads Bizhat Easy Share Turbo Upload You Share Upload Mega Share Wiki Upload Boxstr Save File Tiny Pic
အခမဲ့ Domain မြန်မာ-Domain Multiply Yola Site Make Flash Website Web
ဆော့ဝဲလ် site Full software download Portable apps Download Crew Easy license Free software 1 Free software2Looking for bests Rapidshare links Share file link IP Address Converter Icon finder New Download
convert-ဆိုဒ် online-convert CSS to Java Script image_converter
လက်သန်းချိတ် ကတိပေးခြင်း ဟူသည် (Pinky Swear)
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရေပေါ် ရုပ်ရှင်ရုံ
၁၅ လုံးသာ ထုတ်သော ရွှေဖြင့်လုပ်သည့် Sony Xperia P
သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးမျာ...
Samsung Galaxy S3 က ကမ္ဘာ့အကြမ်းခံဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်...
Facebook သုံးနိုင်သော မြန်မာကျပ် ၅ သောင်းတန် Nokia...
ရုပ်ရှင်ထဲကလို အိမ်ကို ပူပေါင်းချိတ်ပျံသူ
LG ထုတ် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Scan စက်ပါသော ကွန်ပြူတာ မောက်...
Iron Man3- Official Trailer [HD]
စက္ကူနှင့်လုပ်သော အာကာသလေယာဉ်ငယ်ကို ဗြိတိန်တို့ လွင...
The Twilight Saga: Breaking Dawn Part2Fan-Made T...
~~~~~~~~~~~" ကြောက်မက်ဖွယ် မီး (၁၁) မျိုး " ~~~~~~...
ပလ္လင်လု / မလု ပြဿနာ
အားကစား လိုက်စားသူများအတွက် Nike လက်ပတ်
iPhone5နှင့် Samsung Galaxy S3 ထက်သာသော ဖုန်း So...
ကင်ဆာဘေးဆိုးကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အသီးအနှံ ( ၁၀ ) မျ...
The Hunger Games Trailer3Official 2012 [HD] - Je...
သားသမီးတွေနဲ့ နှစ်ဘယ်လောက်ကြာ အတူနေရမလဲ?
ရှားပါး ငှက်မျိုးစိတ် - ဇီးကွက် ကြက်တူရွေး
Huawei မှ ပထမဆုံး ထုတ်မည့် Windows Phone 8 စမတ်ဖုန...
၂၀၁၃ CES (အီလက်ထရောနစ် ပြပွဲ) မှာ ၀င်ရောက်ပြသမယ့်...
iPad4အားဖြုတ်ကြည့်ခြင်း
Android phone Website လမ်းညွန် များ
စိတ်ပြေလျော့ခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ .............
နွားနို့သောက်သုံးခြင်းဖြင့် အရိုးပွခြင်းနှင့် ကင်ဆ...
ဂိမ်းတစ်ခွေကြောင့် အမေရိကန်တို့ ဒုက္ခရောက်နိုင်
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများရဲ့ လွဲနေတတ်တဲ့ အလွဲတွေအကြောင်...
ဓါတ်ပုံသမားများလက်စွဲ onOne Photo Suite7(Latest ...
Photosurgery ! (ဓာတ်ပုံတွင် မျက်နှာကိုအလှပြုပြင်ခြ...
Angry Birds Star Wars ထွက်ရှိ
ထုတ်သမျှဖုန်းတွင် iPhone5ကအခက်ခဲဆုံး ဖြစ်ကြောင်း...
လက်စွပ် MP3(MP3 concept)
Ford နှင့် Microsoft တို့ အသံဖြင့် စေခိုင်းနိုင်သေ...
Samsung Galaxy Note2ကို Samsung မှ ထုတ်ဖော်ကြေညာ...
အဝတ်လျှော်ခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘာ့စွမ်းဆောင်ရည် အမြင့်ဆုံး စူပါ ကွန်ပျူတာ
မြန်မာနိုင်ငံမှထေရ၀ါသံဃာ.ဂိုဏ်းကြီး ( ၉ ) ဂိုဏ်း
ပစ္စည်းအားလုံးကို ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက် အသက်သွင်းနိုင်...
ကမ္ဘာ့လူဦးရေအား ချုံ့ကြည့်ခြင်း __________________...
ဆံပင်မွှေးဖြင့်အလင်းပေးသူ ဆယ်ကျော်သက် နီပေါနိုင်ငံသ...
နိုင်ငံတကာ code များ
Copyright (c) 2012 www.nainglinn.blogspot.com | Designed for Novoline Spielen - Novoline Spiele, Novoline Online